Posted by Rob Y. May 6, 2014 · Leave a Comment
Raha toa ianao ka mividy fiara ho ampiasaina ankoatra ny fanaovana ny tsiranoka hafa izay efa nanolo-kevitra fa mijery, ianao koa dia mila mijery ny fiara freins. Freins amin'ny fiara dia zavatra iray izay natao ho rovitra. Izy io dia ny disadisa misy eo amin'ny Fanodina sy ny fisaka sy mivelatra ny fiara izay mijanona rehefa mampihatra ny freins. Raha samy ny fisaka sy mivelatra sy ny Discs natao avy amin'ny vy mafy fo ianao, dia tsy hahazo hery nijanona misy. Ato amin'ity lahatsoratra ity dia manarona mijery ny anoloana amin'ny fiara sy ny freins kamiao.
Ao amin'ny fiara vaovao amin'ny misokatra boriboriny manodidina dia mety ho somary mora ny mahazo haingana jerena amin'ny toe-javatra nisy ny freins. Freins anoloana dia na aiza na aiza eo amin'ny 60 ary 70 isan-jato ny nijanona hery. Rehefa mandeha voalohany niakatra ho any amin'ny fiara ianao dia afaka mijery ny anoloan'ny rotors notapahiny amin'ny fijerena ny alalan 'ny sisiny sy manara-maso ny toe-javatra nisy ny rotors. Ataovy azo antoka fa ny fiara tsy mbola noroahina, fa raha tsy izany dia ho mafana ny hanendry. Antenaina ny boriboriny manodidina misokatra ampy mba afaka mahazo tsara topazo maso izy ireo. Andramo ka izahao raha tsikaritrareo misy tandavan manerana ny Fanodina. Raha afaka hifikitra ny rantsan-tànany ny alalan 'ny sisiny dia afaka mahatsapa ny Fanodina ihany koa ny mamantatra raha toa ka misy tandavan manerana ny Fanodina. Raha toa ka misy, misy vintana tsara fa ny fiara dia mila tsy ho ela ny asa novakiny. Raha ny Fanodina Tsara sady mandimandina dia izay tsara midika fa ny freins dia tsara endrika.
Dia ihany koa ny te-hanokatra ny ronana sy hijery ny novakiny ranoka. Misy famantarana na ny sehatra teny ivelan'ny ranon-javatra ny novakiny dranomaso, na misy mandroboka tsora-kazo eo amin'ny filler satrony. Ataovy azo antoka fa ny ranoka ao amin'ny fetra manokana. Raha ambany mety ho famantarana iray hafa fa ny fiara dia mila ny asa novakiny. Toy ny fisaka sy mivelatra manao, ny pistons ao amin'ny calipers hanitatra lavidavitra mitaky ny fampiasana ranon-javatra bebe kokoa.
Koa mandehana ankehitriny, mialoha sy hanangonanao ny fiara sy hiverina ny ignition amin'ny, fa tsy hanomboka ny fiara. Eritrereto ny mpanondro rehetra jiro eo amin'ny tsipika. Does the vehicle have an ABS light or brake light? ABS mazava manohitra ny hidin-trano, ary novakiny System eo ambanin'ny toe-piainana faran'izay braking diverts braking hery hafa kodiarana mba hitandrina ny fiara mba tsy hivarina any amin'ny skid. Izany fahazavana matetika mavo eo amin'ny tsipika sy ny “Notapahiny” fahazavana matetika mena. Ary manomboka ny fiara, ary ho azo antoka fa ireo jiro mivoaka. Raha miverina eny, Avy eo ny zava-drehetra ao amin'ny rafitra novakiny tokony ho amin'ny filaminana miasa. Raha misy ABS fahazavana na novakiny mazava mitoetra eo, Dia rafitra ny novakiny dia mila miasa eo.
Manaraka, te-handeha mialoha sy handroaka ny fiara. Raha mitondra fiara ianao hampihatra ireo freins, ary handray an-tsoratra ny amin'ny inona ny familiana no manao. Ve ny fiara mbola mandeha amin'ny tsipika mahitsy, na no mitarika amin'ny lafiny iray na hafa. Ny fiara dia tokony hanohy handeha amin'ny tsipika mahitsy, raha amin'ny lafiny iray kosa dia misarika na ny hafa dia lafiny iray amin'ny freins dia miasa mafy kokoa noho ny hafa, ary mampiseho fa ny asa fanompoana novakiny ilaina. Ianao koa raha te hihaino fampiharana ny freins. Ve izy ireo manao tabataba na fikitroha squealing tabataba? Raha squeal dia iray amantarana fa ny asa novakiny dia vokatry. Maro ny fiara no izao fitaovana amin'ny inona no antsoina hoe “Squealers” eo amin'ny notapahiny fisaka sy mivelatra. Izany dia natao ka rehefa manao ny fisaka sy mivelatra nidina ho any amin-hevitra ny “squealer” mikasika ny famelana Fanodina fantatrao ny fiara fisaka sy mivelatra ary manampy mila miaro ny rotors. Raha mihaino-mitoto vary – tsara dia tena mila mandeha any amin'ny fanamboarana fivarotana mba manana ny freins nijery.
Ao amin'ny fiara vaovao ianao mieritreritra izay mividy, dia afaka ihany koa ny hanafatra iray fiara tatitra tantara mba hijery raha ny fiara efa foana ny mpivarotra sy raha mampiseho fotoana miasa eo. Na izany aza, ny fiara tsy efa foana ny mpivarotra izany rakitsoratra izany dia mety tsy ho hita. Na izany na tsy izany, eo anatrehanao mividy, ianao mba hanontany raha afaka maka ny fiara mpanamboatra ny eo an-toerana mba hanana izany teny avy mba hanome anareo kely kokoa tapa-tsaina.
Ity lahatsoratra ity dia noforonina tamin'ny iray amin'ireo tompony sy manome izany ho an'ny fampiasana sy ny tombontsoan'ny izany mpamaky. Isika tsy nahazo onitra avy amin'ny hafa Affiliates momba ity toerana noho ny fanoratana ity lahatsoratra ity.
Tags: nanamarina freins, fiara tatitra tantara